Fanavaozana, 2012: Toa tsy misy intsony ity fitsangatsanganana ity.
Sary momba an'i Avalon Grand Cancun
Avalon Reef Club ao Isla Mujeres, ary ny hotely boutique Avalon Baccara izay "varavarana roa midina" avy amin'ny Avalon Grand Cancun.
Avalon Grand Cancun dia ao amin'ny Hotel Zone amin'ny 14 kilaometatra ny moron-dranomasin'i Karaiba. Toy ireo tora-pasika maro any Cancun, dia naratra ny rivo-doza; jereo ny fanamarihana momba ny toe-java-manjono, ambany.
Avalon Cancun Grand- Features
Ireo tilikambo midina dia manana efitra fisakafoanana maivana sy zana-pianakaviana, efitrano iray sy roa ambiavy misy lakozia. Ny tsirairay dia samy manana ny fomba fijeriny an'i Karaiba amin'ny atsinanana na ny Nichupte Lagoon any andrefana. Ny efitrano malalaka indrindra dia miankina amin'ny fianakaviana.
Anisan'izany ny dobo lehibe, toeram-pisakafoanana, spa, trano fisakafoanana maromaro.
Anisan'izany ny volley volleyball, volley volleyball, aerobics rano, bingo, lesona amin'ny teny espaniola, lesona dihy, antoko plaj.
Ny vahiny dia afaka mihinana sy milalao ao amin'ny Avalon Baccara Cancun sy ny Club Reunion Avalon amin'ny Isla Mujeres.
Ny Wild Things Kids Club dia manana hetsika 4- hatramin'ny 10 taona
Ho an'ireo izay te hividy sy hanina (na hena fotsiny ao amin'ny Planet Hollywood) ao amin'ny Hotel Zone , ny Avalon Cancun Grand dia tsara toerana.
Mahaliana ny andro fitsidihana any amin'ny faritr'i Mayan Riviera any atsimon'i Cancun: rava maitso, snowshoeing, cenotes, Xcaret sy Xel-ha; Vakio ny momba ny Maya Riviera
Ny orinasam-pivezivezena dia manolotra fitsangantsanganana ho an'ny snorkeling amin'ny harambato vatosoa, sambo baoritra, sambon-danitra, fitsangantsanganana amoron-dranomasina
Betsaka ny vahiny miara-misakafo amin'ny sambo amin'ny sambo any Avalon Reef Club any Isla Mujeres 6-1 / 2 kilaometatra lavitra. Ny tora-pasika tsara tarehy tsara dia tsara ho an'ny ankizy.
Mariho fa noho ny fahasimban'ny rivo-doza, ny fipoahana ary ny fanarenana, ny toetry ny torapasika ao Cancun dia azo havaozina; Alaharo hatrany ny vaovao farany. Hamarino ny fanamarihan'ny hotely any amin'ny TripAdvisor, ary ny Cancun Resort Forum. Jereo koa ny sary nalaina momba ny toe-java-bodiary any amin'ny faritra maro any Cancun.
Fantaro bebe kokoa momba ny Avalon Cancun Grand:
Jereo ny tranokala Resorts Avalon
Vakio ny fanamarihan'ny mpitsidika ao amin'ny TripAdvisor
Jereo ny vidin'ny Kayak.com
Ampitahao ny vidin'ny Avalon Grand Cancun sy ny sisa tavela any Cancun
* Andramo foana ny tranonkala fitadiavana vaovao!
Tahaka ny mahazatra any amin'ny indostrian'ny fizahantany, ny mpanoratra dia nomena fahafahana mandrindra ny zava-kendren'ny famerenana. Na dia tsy nisy fiantraikany tamin'ity fanadihadiana ity aza, mino an'i About.com ny famoahana tanteraka ny fifandonana mahaliana rehetra. Ho fampahalalana bebe kokoa, jereo ny politika etika.
Inona no tokony hatao any Cancun rehefa mitranga izany?
Torolalana ho an'ny Club Med Cancun Yucatan miaraka amin'ny ankizy
Isla Holbox: Izay rehetra tokony ho fantatrao
Florence hetsika tamin'ny Janoary sy Febroary
Ahoana no ahazoana antoka fa mahazo torimaso tsara ianao rehefa mandeha solo
Ny fiaramanidina tsara indrindra ho an'i Maraoka avy any Espaina
Fisaorana an'i Torkia handeha any Washington, DC
Ahoana no ahazoana toerana ao amin'ny Yosemite High Sierra Camps
Relics tany Roma
Famerenana ny fiara cable Ngong Ping Hong Kong
Michigan Top Industries, orinasa sy mpampiasa
Aiza no itondrako ireo ankizy any Las Vegas?
Washington DC Roads (Highways manodidina ny Renivohitra Capital)